Iskaashiyada Ganacsi ee VANTAGE | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Daryeelka Iskuulka kahor iyo kadib
Skipperettes - Dance Dance
Kubadda Tonka Fastpitch Softball
Guddiga Lahaanshaha Ardayda
Raadinta Xirfadda Tiknikada ee Minnetonka (Tijaabada ACT / SAT)
Ururadu waxay iskaashi la sameeyaan kooxaha ardayda ee VANTAGE si ay u wada shaqeeyaan si loo xalliyo dhibaatooyinka dhabta ah iyada oo loo marayo shaqada mashruuca lagu wado. Waxaan bulshadayada dibedda ah ka fiirineynaa shirkadaha si aan ula shaqeyno kuwa bixiya mashruuc ganacsi oo dhab ah ama loolan ugu jira ardayda VANTAGE si ay u baaraan, u falanqeeyaan una caawiyaan xallinta. Kooxaha ardayda waxay soo bandhigaan cilmi baaris macaamiisha, fiidiyowyo, ololeyaal suuq geyn iyo falanqeynta xogta, si magacooda dhowr. Ardaydeenu waxay u shaqeeyaan kooxo yaryar si ay natiijo wanaagsan u keenaan shirkaddaada.
Codsiga Shuraakada Mashruuca
Hadda aqbala codsiyada sanad dugsiyeedka 2020-21!
Waxaan la shaqeynaa shirkadaha iyo ururada cusub bilowga simistar kasta. Waad dalban kartaa adigoo buuxinaya arjiga.
Sidee ayuu mashruuc u eg yahay?
Kooxaha VANTAGE waxay la shaqeeyaan shirkado cusub bilowga simistarka kasta. Waxyaabaha soo socdaa ayaa qeexaya waxa aad filan karto marka aad isqorto mashruuc:
Waxaan caddeeyay dhibaato ama loolan.
Hoggaaminta VANTAGE ayaa kaala shaqeynaya sidii loo waafajin lahaa jaartarka.
Waxaa kula soo xiriiraya kooxda ardayda si aad u yeelatid kulanka bilaabista.
Ka dib bilowga, balanqaadkaagu waa udub dhexaadka iyo kulanka ugu dambeeya halkaas oo ardaydu ku soo bandhigi doonaan daraasaddooda iyo natiijooyinkooda.
Waxaan kaa codsaneynaa inaad ku heli karto emayl ama taleefan wixii su'aalo dheeri ah ee ku saabsan xayeysiinta. Waqtiga celceliska waqtiga ballan-qaadista inta simistarku socdo qiyaastii waa 10-12 saacadood.
Ardayda VANTAGE waxay u keenaan iskudhaf shaqo adag iyo aragti gaar ah caqabaddaada. Qaar ka mid ah Mashaariicdayada waxay horseedeen faa'iidooyin dhowr milyan oo doolar ah la-hawlgalayaasha. 95% wada-hawlgalayaasha mashruucu waxay muujiyeen inay jeclaan lahaayeen inay mashruuc kale la sameeyaan kooxda VANTAGE. Waxaan ku wada qabanaa qiime aad u fiican - bilaash ah!
Waxaan heysanaa todobo xarumood VANTAGE, xarig walbana wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo mashruucyo ah.
VANTAGE Strand Mashaariicda Caadiga Ah
Naqshadeynta + Suuqgeynta Logos, sumadaynta, agabyada suuq geynta, ololayaasha warbaahinta bulshada, qaabeynta websaydhada
Ganacsiga Caalamka Daraasad macmiil, cilmi baaris tartan, tartan ganacsi kasta
Jiritaanka Caalamka Mashaariicda deyrta ayaa ah mid ku wajahan cunnada: horumarinta waxsoosaarka cusub, cilmi baarista macaamiisha, nidaamyada wax soo saarka cunnada, wax kasta oo cuntada la xiriira. Mashaariicda guga waa jawiga / joogtaynta diiradda.
Falanqaynta Ganacsiga Adeegsiga xog iyo falanqeyn aaladaha lagu helo fikradaha ganacsiga
Saxaafadda dhijitaalka ah Sheeko dhex marsiinta warbaahinta; fiidiyowyada iyo warbaahinta bulshada si aad ereygaaga u soo hesho
Sayniska Caafimaadka Waxkastoo la xiriira caafimaadka. Daraasadaha akhlaaqda aadanaha, dabeecadaha wanaaga, iwm.
Khibradda Isticmaalaha (UX) Naqshadeynta Horumarinta codsiyada mobilada iyo websaydhada loogu talagalay meheradaha dhexdhexaadka ah
Shuraakada La Soo Bandhigay - Best Buy
Ka daawo muuqaalka KARE11 ee VANTAGE iyo shaqadeena ah Best Buy
Daraasadaha Xaaladaha Wadaaga ee Mashruuca
Wada-hawlgalayaasha mashruucu waxay u dhexeeyaan shirkado caalami ah illaa ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah iyo kuwa aan macaash doonka ahayn. Haddii aad caqabad ku qabto waxaad u isticmaali kartaa caawimaad, waan ku faraxsanahay inaan tixgelinno hay'addaada.
Istaraatiijiyada Barnaamijka VANTAGE
Isuduwaha Barnaamijka VANTAGE
4350 Wadada Bakhaarka
VANTAGE Highway 7 Goobta
18707 Old Excelsior Blvd
Dugsi Sare (9-12) /
Diiwaangelinta 21-22: VANTAGE
TAARIIKH WAQTIGA MACLUUMAAD DHACDO
Febraayo 9, 2021 6pm
Webinar: Macluumaadka VANTAGE
Fadlan iska qor halkan Hordhaca VANTAGE. Ka dib markaad isdiiwaangeliso, waxaad heli doontaa emayl xaqiijin ah oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan ku biirista webinar.
Febraayo 25, 2021
12-ka habeenimo Kulan Google: VANTAGE Soo-galid Q & A
ARDAYDA: Nagala soo qaybgal munaasibadda VANTAGE Drop-in event. Koodhka Kulan Google: VANTAGE
Maarso 2, 2021 6pm Webinar: VANTAGE Town Hall
Fadlan halkan iska diiwaan geli VANTAGE Town Hall bisha Maarso 2, 2021 6:00 PM CST. Ka dib markaad isdiiwaangeliso, waxaad heli doontaa emayl xaqiijin ah oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan ku biirista webinar.